Soo Iibso funaanado yar -yar oo la qaadan karo Mashiinka Daabacaadda Wareejinta Saxaafadda Kuleylka - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
T-shaati-gacmeedyada Mini Portable Mashiinka Daabacaadda Wareejinta Saxaafadda
$ 97.99 qiimaha joogtada ah $ 139.99
Color Furaha EU -da cagaaran 220v Fiilada cagaaran ee Mareykanka 110v Furaha Midowga Yurub 220v Xadhkaha cas ee US 110v Buluugga Midowga Yurub 220v Buluugga US fur 110v Fiilada Green UK 220v Furaha Red UK 220v Buluugga UK fur 220v
maraakiibta From United States Shiinaha Czech Republic GERMANY
Furaha EU -da cagaaran 220v / Mareykanka Furaha EU -da cagaaran 220v / Shiinaha Green US plug 110v / Mareykanka Fiilada cagaaran ee Mareykanka 110v / Shiinaha Furaha Midowga Yurub 220v / Mareykanka Furaha Midowga Yurub 220v / Shiinaha Red US plug 110v / Mareykanka Red US fur 110V / Shiinaha Buluugga Midowga Yurub 220v / Mareykanka Buluugga Midowga Yurub 220v / Shiinaha Blue US plug 110v / Mareykanka Blue US plug 110v / Shiinaha Buluugga Midowga Yurub 220v / Czech Republic Buluug US fur 110V / Czech Republic Cagaarka US fur 110V / Czech Republic Furaha EU -da cagaaran 220v / Czech Republic Red US fur 110V / Czech Republic Furaha Midowga Yurub 220v / Czech Republic Fiilada Green UK 220v / Shiinaha Cagaaran UK fur 220V / Czech Republic Red UK plug 220v / Mareykanka Furaha Red UK 220v / Shiinaha Red UK fur 220V / Czech Republic Blue UK plug 220v / Mareykanka Blue UK plug 220v / Shiinaha Buluugga UK fur 220V / Czech Republic Green UK plug 220v / Mareykanka Fiilada EU -da cagaaran 220v / GERMANY Red US fur 110v / GERMANY Furaha Midowga Yurub ee 220v / GERMANY Buluug UK fur 220v/GERMANY Fiilada Green UK 220v / GERMANY Red UK fur 220v/GERMANY Buluugga Midowga Yurub 220v / GERMANY Buluug US fur 110v/GERMANY Cagaaran US fur 110v/GERMANY
T -shaati -gacmeedyada Mini Portable Mashiinka Daabacaadda Kala Wareejinta Saxaafadda - Cagaaran EU fur 220v / Mareykanka gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha: caag iyo maskax
Nambarka Moodeelka: E67423
Nooca: Imprimerie Machine
Astaamaha: Mashiinka Daabacaadda ee funaanad-yar
Style: Sublimation Machine jediyay
Hagaajinta tayada, faahfaahin kasta si taxaddar leh ayaa loo nadiifiyaa
Naqshad gacmeed aad u qurux badan.
Saldhig ka-hortagga gubashada oo tayo sare leh.
Saxanka hoose ee aadka u raagaya.
Qaylo -dhaan marka heerkulka la dejiyay la gaadho.
Ku qalabaysan suufka kuleylka
Hawl gariir otomaatig ah oo raaxo leh.
Naqshadeynta la casriyeeyay & Kiiska Qaadista: Gacan-ku-qaabaynta wadnaha ayaa ka dhigaysa mid deggan oo qurux badan. Ku rid sanduuq wax lagu kaydiyo oo hufan, weli waxay u egtahay farshaxan. Waxaa jira bac dheeraad ah oo wax lagu kaydiyo, suuf isbuunyo ah iyo qasacadda waraabinta. Buufi xoogaa biyo ah ka hor inta Ironing kasta ay shaqadaada ka dhigi doonto mid fudud.
Qaabka Fudud & Qaabka Xirfadeed: Qaabka fudud wuxuu leeyahay 4 heerkul, waqtiga hawlgalkana wuxuu u dhexayn karaa 10-120 ilbidhiqsi. Qaabka mihnadlaha ah waxaa lagu dejin karaa heerkul kasta inta u dhexeysa 284-410 ° F waqtiga hawlgalkana wuxuu noqon karaa meel kasta inta u dhexeysa 10-999 ilbidhiqsi. Habka hawlgalka muhiimka ah waa mid aad u adag, fadlan tixraac buug -gacmeedka.
Function Press & Automatic Function & Plate Plate hoose: Saxanka hoose wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo ka samaysan chrome electroplated, taas oo aad u waarta, looma baahna in laga walwalo waxyeellada qaybaha goor dhow.
Fikrad & Si Weyn Loo Adeegsaday: Yar yar oo si sahlan loo qaadi karo. Ku habboon wareejinta sawirrada ama qoraalka funaanadaha, dharka, bacaha, dermaha jiirka, koofiyadaha, kabaha, xayawaanka cufan, iwm. Badbaadada awgeed, fadlan sug in ay si buuxda u qaboojiso kahor kaydinta. Waxaa jiri doona beep marka la kululeeyo heerkulka la dejiyay, oo si otomaatig ah ayuu u bakhtiin doonaa haddii aan shaqada la bilaabin 30 daqiiqo kadib.
Qaabka fudud Heerkulka heerkulka: 4 heerkul, 284 ° F / 329 ° F / 365 ° F / 410 ° F. Waqtiga dejinta waqtiga: 10-120 sekan.
Xirfadlaha heer-kulka xirfadeysan oo heer sare ah: heerkul kasta oo u dhexeeya 284-410 ° F. Waqtiga dejinta waqtiga: 10-999 sekan.
Aad u fiican, oo la mid ah sawirka, si aad u fiican ayuu u shaqeeyaa, waxaan dalbanayaa wax aad u yar. Shixnaddu waxay ahayd mid aad u dhakhso badan.
Waxay la mid tahay sharraxaadda, adigoo riixaya dhibaato la'aan marka heerkulku qaadanayo, si dhakhso leh u timaad
Waan jeclahay mashiinkayga cusub! Waxaan mar hore isku dayay inay si fiican u shaqeyso! Oofiyey dhammaan filashadaydii, dhoofinta degdegga badan ee Chile Waxaan kugula talinayaa 100% dukaankan